Badweyntimes.com » DEG DEG: Xildhibaano la safnaa Sh.Shariif oo u Wareegay Musharax Caan ah…Badweyntimes.com
DEG DEG: Xildhibaano la safnaa Sh.Shariif oo u Wareegay Musharax Caan ah…
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in Gudoomiyaha Xisbiga Daljir iyo Xoghayahiisa Guud, Xildhibaan Xasan Macalin Maxamuud iyo Senator Axmed Macallim Fiqi ay si wadajir ah u bedeleen Mowqifkii ay Isbahaysiga kula ahaayeen Murashax Sheekh Shariif.
Labadaa Mas’uul oo hore Jaal Siyaasadeed la ahaa Murashax Sheekh Shariif ayaa la sheegay inay ku biireen Xildhibaanadda taageersan Murshax Maxamed C/llaahi Farmaajo, xilli ay goor dhow bilaaban doonto Doorashadda Madaxweynaha cusub ee JFS.
Ma cadda sababaha rasmiga ee Xasan Macallim iyo Axmed Fiqi dhabarka u jeediyeen Murashax Sheekh Shariif, xilli uu Murashax kasta ku xisaabtamayo tirada Xildhibaanadda u ballan qaaday inay codkooda siinayaan.
Sheekh Shariif waxa uu taageero xooggan ka geystay Asaaska Xisbiga Daljir oo lagu dhawaaqay bishii December 1-dii ee sannadki 2014-kii, iyadoo inta badan xubnaha Xisbigaasi yihiin Taageerayaashii Sheekh Shariif.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inaysan Siyaasadda lahayn Saaxiib Joogto ah ee ay leedahaydan iyo danaysi.
Dhinaca kale, ilaa 10-Xildhibaan oo horey ula kulmay Murashax Sheekh Shariif ayaa la sheegay inay iyagana u wareegeen Murashax Farmaajo.
Si kastaba ha ahaatee, Galaangalka Murashixiinta Madaxweynaha ayaa u muuqda mid ay Xildhibaanadda ku xodxodanayaan, waxaana la sheegay inuu Murashax kasta tag iyo tabar isugu geynayo sida uu ku heli lahaa Xildhibaano badan oo uu kula heshiinayo ballanqaadyo Xilal iyo abaalmarino kale
DEGDEG: Xildhibaano Badan Oo Ka Soo Laabtay Hoolka Doorashada..[Maxaa Cusub?]
Toos Daawo Sawirada: Xildhibaanadii Codeyn lahaa oo lagu Bahdilay Albaabka Xaruunta Doorashada…